Usuku My Pet » Indlela Yokubhekana Ngemva Break Up
Indlela Yokubhekana Ngemva Break Up
Susani Ben & Alive. Futhi ibhokisi kwezicubu. Ngoba sekuyisikhathi siphume ubeke impilo yakho emuva ndawonye. It is hhayi kuzoba like abanye film ngokuyisimangaliso romantic lapho kweso uthole elilela futhi uqhubekela elandelayo kweso. Kodwa ngokwazi laphaya nokugcina ingqondo yakho asebenzayo ngeke ucabange okuningi mayelana break-up and phezu kwesikhathi imizwa bayobuna nokuthi ngentambo engabonakali ukuthi latching emapulangweni inhliziyo yakho ngeke aphambane ngosizo ezintathu okulandelayo:
Kungakhathaliseki ukuthi umsebenzi wakho noma umsebenzi ngokuzithandela noma adideke noma ekolishi noma isipiliyoni, Ngilokhu wagxila kulokho. Khumbula ukuthi lezi zinto for ikusasa lakho ungavumeli abanye break-up uthole ngendlela nakuba ingazizwa nzima kakhulu ngesikhathi hhayi. Futhi ongazithola ukuthatha i class kusihlwa. Just musa ukhathale in the inqubo. Kuphela ngalokho uku ukwazi for!
Khuluma nabantu obakhathalelayo. Nakuba ukugqoka a lip esintamo engenhla nezwe ngaphandle akukho namahloni breaking phansi futhi ukuveza imizwa yakho phezu break-up vulnerably kuphume emndenini nakubangane. Lokhu kuzosusa ingqondo yakho futhi ikhanda lakho walabo izinyembezi ukuthi basuke okuncane ukuze uthole ukuthi ngabe wena uyazi noma cha. Ngakho abantu abaningi bazama ukuba babhekane break-up bebodwa futhi kuyangilimaza. By ukukhuluma nabantu abathanda nawe ngalokho kulimaza wena esikhundleni salokho uzokwazi ukuthatha emhlabeni ngomuzwa licace kakhulu kalula amehlo licace.
Ngiyazi ukuthi ngezinye izikhathi kungaba nzima ukuba fun lapho uzwa ubuhlungu. Kodwa zama enzima kakhulu yakho ukuze baphoqelele ngalo ngoba iyobe iwufanele it in the end. Phuma (ungekho waphula!) futhi ujabule nomkhaya wakini noma abangane in the pub, at amakhonsathi noma nomculo, njll … Shiya izinkinga zakho ekhaya. Gcina wena nesithakazelo futhi bajabule ungachithi njengokufunda, ukulalela umculo nokubuka TV. Ungazivumeli alahlekelwe waba umuntu wena ngoba uma sikwenze kungaba umgwaqo onzima emuva ukuphi. Thatha isikhathi sakho nge ekutholeni uthando new. Ungabi nomuzwa ngaphansi kwengcindezi yinoma ukwenza kanjalo. Esikhathini siqu, ake uthando.
Yini Abesifazane Want Ngempela?